Mukuru mutsva anonzi Japan National Tourism Organisation hofisi yeNew York
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Mukuru mutsva anonzi Japan National Tourism Organisation hofisi yeNew York
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Japan Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Michiaki Yamada ari kutarisira kushanda pamwe nechikwata cheJNTO kuratidzira uye kuratidza kusiyanisa mune zvakasikwa uye zvetsika nyika dzeJapan kune vamwe vafambi veAmerica.
Michiaki Yamada kutungamira hofisi yeNew York yeJNTO
Michiaki Yamada anotsiva Naohito Ise
Asati adzokera kuUS, Michiaki Yamada akasimudzira nhaka yeJapan nemaindasitiri neCabinet Secretariat
Michiaki Yamada asvika muNew York achibva kuJapan kuzotungamira hofisi yeNew York ye Japan National Tourism Organisation (JNTO), achibudirira Naohito Ise.
Mr. Yamada akaberekerwa muSaitama Prefecture kuchamhembe kweTokyo uye akapedza kudzidza kuWaseda University Chikoro chePolitiki Sayenzi neEconomics muna 2003. Akatanga basa rake rehurumende nebazi rezvevhu, zvivakwa, zvekutakura nekushanya mu2006, achishanda munzvimbo dzakasiyana siyana. chinzvimbo neRoad Administration Dhipatimendi.
Kubva 2008 kusvika 2011, Va Yamada vakashanda neLand Price Price Research Division pamwe neTranslation Planning Division vasati vadzidza kunze kwenyika kuYunivhesiti yeMichigan. Akazodzokera kuJapan mushure mekudzidza kwake uye akashanda neTrans-Pacific Partnership Policy Headquarter, iyo Japan Tourism Agency, achitarisana nekusimudzira kwekushanya, uye semutevedzeri mukuru wedare reUrban Transport Facilities Division. Asati adzokera kuUS kuzova Executive Director weJNTO New York Office, akasimudzira nhaka yeJapan yekumaindasitiri neCabinet Secretariat.
"Iropafadzo kudzokera kuUnited States uye kushanda neJNTO New York Office," vakadaro VaYamada. "Sezvo isu tinogamuchira hutsva hutsva mumashure-COVID epasi rose, ndiri kutarisira kushanda nechikwata cheJNTO kuratidzira nekuratidzira kusiyanisa kwezvinhu zvakasikwa netsika dzepasi rose kuJapan kune vamwe vafambi veAmerica."
Mr. Yamada anofarira zvekushanya kunze uye anozobatanidzwa nemukadzi wake nemwanakomana kutanga kwegore rinouya.